5 qarsoon si loo helo shaqo aad riyo | USAHello | USAHello
By USAHello_staff April 17-, 2018 Shaqooyinka iyo Careers, Voices
5 qarsoon si loo helo shaqo aad riyo
Waa maxay sirta helo shaqo aad riyo?
Helitaanka shaqo aad riyo ma ahan wax fudud in la sameeyo. dhamaadka sanad dugsiyeedka waxaa soo socda. Summer waa soo dhow dahay, waxaana ku dhawaad ​​kalabadh sanadka oo dhan. Dadka qaarkood, Tan waxaa looga jeedaa qalinjabinta, u dhaqaaqo meel cusub ama magaalada ama raadinta shaqo cusub.
Anigu waxaan ahay hubaa helo shaqo cusub waa wax aynu dhammaan u leeyihiin in ay la nolosha ka qaban. Sidee baad ku qiimayn lahayd khibradaada guud ee shaqo raadinta? Waa maxay sirta helo shaqo aad riyo?
Waayo, qaxootiga iyo muhaajiriinta, waxaa jira caqabado gaar ah waxaan u leeyihiin in ay la kulmaan marka ay raadinayso shaqo cusub ama xirfadiisa. maanta, Waxaan doonayaa in aan idinla wadaago tabo dhowr ah si ay kaaga caawiyaan in aad shaqo aad riyo ka heli.
5 Secrets Si Helitaanka Your Dream Job
1. Abuur resume ah shaqada gaar ah aad rabto ama warshadaha shaqo ee danta.
Waxaad leedahay in la ogaado nooca shaqada aad doonayso iyo in la abuuro resume ah, waayo,. Guud, isagoo resume waa wanaagsan yahay. Laakiin isagoo resume ah nooca shaqada in aad rabto in aad samayso waa ka sii fiican. Tag online iyo cilmi-baarista ku saabsan shaqada aad doonayso in aad qabato oo arag bilaabi tusaalooyin shaqooyin kuwa.
2. Dhis image ah in si dhab ah ay ka dhigan tahay qofka aad tahay iyo cidda aad rabto in aad noqon.
dheeraad ah oo ku saabsan qofka aad tahay Baro by helitaanka naftiisa. Ogow shakhsiyadda. Waa maxay ujeedada iyo sidee shaqada aad rabto in aad ku caawin fuliyaan qiimaha aad? Waa maxay nooca shaqo ma aad shaqayso in ay ka shaqeeyaan? Sidee waa waxa aad doonayso in aad qabato ciyaarta waxa aad u qabanaysay?
Ka bilow Google.com. Marka aad google magacaaga maxaad aragtaa? Haddii aad loo-shaqeeye, aad qabsato lahaa naftaada ku saleysan macluumaadka soo baxa? Tan waxaa ka mid photos on xisaabaadka warbaahinta bulshada oo dhan articles kale ee ku sheeg magacaaga.
Tusaale ahaan, wixii aad ka qayb qaadan kara in ay ka caawinayaan dhismaha aad resume? Haddii aad tahay qaxooti ama soo galootiga ee dalka Mareykanka, waxaad ka heli kartaa lug Voices our. our barnaamijka Voices waxaad bixin doontaa, waayo, aad qoraal. Waxaan doonayaa in aan wax badan ka bartaan.
3. Bilow xiriirinta
Volunteer in mashaariic aad danaynayso si ay u dhisaan saaxiibtinimada weyn iyo xidhiidhada. Networking waxaa saabsan ma in ay dhacdo isku xirka a. Kasbashada dadku waa ku saabsan sameynta xidhiidhka caafimaadka. Tan waxaa ka mid garanaya meelaha noloshaada halkaas oo aad si fiican haatan uma oo ka baxday jidka aad si aad u hesho shakhsiyaadka ku caawin kara.
Qodobka talinayo: Sidee xiriirrada bulsho ee qaxootiga.
4. Isticmaal news degaanka, LinkedIn, iyo dhufto ee online kale si aad u hesho shaqo.
Ma ogtahay in website wargeysyada maxalliga ah ee ay u badan tahay in ay leeyihiin Qaybta Jobs a? Ma ogtahay in aad si fudud u codsan kartaa shaqo adiga oo isticmaaleya isticmaale account LinkedIn iyo resume LinkedIn? Waxay wax badan oo shaqo la posted on LinkedIn maalin kasta.
Haddii aanad lahayn xisaab LinkedIn a, aad u baahan tahay si aad u hesho mid ka mid ah. Intaa waxaa dheer, waa inaad ka fakartaa uploading aad resume aad LinkedIn. Tani waxay kaa caawin in aad si fudud u codsan karaa shaqooyin kala duwan iyo in la kordhiyo fursadda caga shaqo aad riyo.
5. Isu diyaari online oo waraysi la taaban karo
Diyaarinta wareysi shaqo ka dhigan in ka badan barashada su'aalaha wareysi shaqo. Diyaarinta wareysi sidoo kale ka dhigan tahay badan oo ku saabsan shirkadda waxbarashada aad rabtid in aad u shaqeyso. Intaa waxaa dheer, in badan oo aad ogaato oo ku saabsan shirkadda aad u codsaneysid, fiican. Marka aad qabtid wareysi, waraysanaya ay raadinayso waxa aad awoodaan inay bixiyaan shirkadda noqon doonaa. Waa maxay waxa ku jira iyaga, waayo,? Waa maxay sababta ay aad u kireeyo?
Helitaanka Jobs in America | Annagu garan mayno sababta aad ayaa la sheegay in aan aan shaqaaleyn